စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: October 2009
အဲ့ဒီ အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို
ငါ့ရင်ထဲ သိမ်းထားပီးမှ ချစ်သူရယ်
အဆွေးဆိုတာ အတွေးက စသတဲ့
မင်းနဲ့ငါ ဒီဘဝ မနီးသမျှ
(၂၆-၁၀-၂၀၀၉၊ ၁၂း၃၉ am)
(အနော် အကြိုက်ဆုံး အဆိုတော် ကိုလေးဖြူရဲ့ အလဲအကွဲ သီချင်းကို နားထောင်ရင်း ဒီကဗျာလေးကို ရေးခြစ်မိတာပါ :P)
at 8:40 AM Labels: ကဗျာ၊ စိတ်ထွက်ပေါက်
ဟော .. ဟိုက လွင်ပြင်ကျယ်မှာ
မင်းရင်ခွင်တစ်စုံလုံးကို ပစ်သွင်းကြည့်လိုက်ပါ ...
မင်းဟာ ခပ်စိမ်းစိမ်း အကြည့်တွေနဲ့ပဲ ဖလှယ်တော့မှာလား ..
မင်းရော သူတို့လို ခပ်စိမ်းစိမ်းစကားတွေနဲ့ လှောင်ပြောင်မှုကို
မျက်ဝန်းအစုံကို အေးစေတယ်ဆို ..
မြင်မြင်သမျှ အေးမြချင်တဲ့ မင်းစိတ်
စိမ်းရောင်သန်းတဲ့ လွင်ပြင်ကို ပမာပြု
(အနော့်ရဲ့ စိမ်းသက်ခြင်းဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်အပီးမှာ ကိုအရုပ်ကလေးက ထပ်ဆင့် ကဗျာရေးပေးတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်)
at 7:40 AM Labels: ကဗျာ၊ အငှားရင်ခုန်သံ
အေးစက်စက် နှလုံးသားကို အပူတိုက်ဖို့
ငါ့ရင်ထဲ ခါတော်မီ အလွမ်းမိုးတွေ
မလွမ်းဘူးလို့ ကျမ်းစူးအောင် လိမ်ဖို့မလိုပေမဲ့
သက်ပြင်း အမှတ် ၆၂ ကို ငါခြွေချလိုက်တယ်
(၁၉-၁၀-၂၀၀၉၊ ၁၂း၃၀ am)
at 10:46 AM Labels: ကဗျာ၊ အတွေးပုံရိပ်
A for A Naw & P for Pyae Sone
မမ ချိုကိုသဇင်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်လေးက အနော့်ကို တဂ်တဲ့ အနော် (or) A Naw
မမ ဆုမွန်က သူ့ညီမငယ်လေး ပြည့်စုံကို တဂ်တဲ့ပို့စ်အတွက်က ပြည့်စုံ (or) Pyae Sone
တဂ်ပို့စ်နှစ်ခုကို ပေါင်းပီး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်နော်… ဟိဟိ
အခုတလော အနော် နေသိပ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ facebook ထဲမှာ လယ်ရိတ်လိုက် ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်လိုက်နဲ့ပဲ နေနေမိတယ်.. အကိုတွေ အမတွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဘယ်ဘလော့ကိုမှ မလည်ပတ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေလို့ တောင်းပန်ပါတယ်နော်.. အခုတော့ ဘလော့လေးထဲကို ပြန်ရောက်လာပါပီရှင်
A for A Naw by Ma Chocothazin
1. What is your name – A Naw
2. A four letter word – Amen
3. A boy’s name – Aung
4. A girl’s name - Aye Pyae Sone
5. An occupation – Artist
6. A color – Apple
7. Something you’ll wear – Apron
8. A food – Apple cake
9. Something found in the bathroom – Air Fresher
10. A place – Australia
11. A reason for being late – A little busy, so plz wait dear
12. Something you’d shout – Arrr
13. A movie title – American Dream
14. Something you drink – Apple Juice
15. A musical group – Acid
16. An animal – Ant
17. A street name – Aye Tar Yar
18. A type of car – Air Corn Bus
19. The title of the song – All are shit
20. A verb – Aspire
1. What is your name : အနော်
2. A four Letter Word : အိမ်ပြန်ချင်တယ်
3. A boy's Name : အောင် (သူငယ်ချင်းလေး)
4. A girl's Name : အေးချမ်းဆု (တူမငယ်လေး နာမည်)
5. An occupation : အကောင့်တန့် (ငှဲလျောင်းငှဲလျောင်း)
6. A color : အပြာရောင် (အရမ်းကြိုက်တယ်)
7. Something you'll wear : အလန်းဒီဇိုင်း (ဟိဟိ)
8. A food : အုန်းထမင်း (သွေးတက်မလား မသိ)
9. Something found in the bathroom : အုန်းဆံဖတ် (ဂျီးတွန်းဖို့)
10. A place : အေးဆေးတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလေး
11. A reason for being late : အရမ်း အရမ်း ဘီးဇီးနေလို့ပါကွယ် ဟဲဟဲ
12. Something you'd shout : အမငီးတော့်
13. A movie title : အိပ်မက်စေညွှန်းရာ
14. Something you drink : အုန်းရည်
15. A musical group : အိုင်စီ
16. An animal : အကောင်ရှည် (မြွေ)
17. A street name : အုတ်လမ်း (ရွှေဂုံတိုင်)
18. A type of car : အော်စတင်
19. The title ofasong : အကြင်နာစစ်ရင်
20. A verb : အကြင်နာပေးချင်သည် :P
P for Pyae Sone by Ma Ma Suu Mon
1. What is your name – Pyae Sone
2. A four letter word – Pure
3. A boy’s name – Phyo
4. A girl’s name - Phyu
5. An occupation – Pupil
6. A color – Pink
7. Something you’ll wear – Pant
8. A food – Pork
9. Something found in the bathroom – Pond Cleanser
10. A place – Pyin Oo Lwin
11. A reason for being late – Poor transportation
12. Something you’d shout – Pi Yaw hayyyyyyyyyyy
13. A movie title – Puzzle
14. Something you drink – Pepsi
15. A musical group – Paw Taw Taw
16. An animal – Pusi cat
17. A street name – Pan Pin Gyi Lan
18. A type of car – Porsche
19. The title of the song – People
20. A verb – Prospect
နာမည်က - ပြည့်စုံ
ပြောချင်တဲ့စကားလေး လေးလုံးက - ပျော်ရွှင်ပါစေ
ကောင်လေးနာမည်က - ပေါက်စီ :P
ကောင်မလေးကတော့ - ပြည့်စုံပေါ့လို့
လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်က - ပူတင်းဖုတ်တဲ့သူ (စားချင်လို့)
အရောင်ထဲမှာတော့ - ပြာပြာပဲ ဟဲဟဲ
ဘာဝတ်ထားလဲဆိုတော့ - ပုံတုံးတုံး ဘလောက်စ်လေးပါ (လူကလဲ ပေစုတ်စုတ်ကလေး ဟိဟိ)
ဘာအစားအစာကြိုက်လဲဆိုရင် - ပေါက်စီ (တကယ်ကြိုက်တာပါ)
ရေချိုးခန်းထဲတွေ့တာတော့ - ပုဝါပေါ့
နေရာကတော့ - ပြင်ဦးလွင် (စိတ်ကူးထဲမှာ တိုက်အိမ်လေးဆောက်ထားတယ်)
ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျလဲဆိုတော့ - ပူလွန်းလို့ပါ
အော်ချင်နေတာကတော့ - ပါးစပ်ပိတ်ထားကြစမ်း ဟွန်း
ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ - ပန်းသခင်
ဘာသောက်ချင်လဲဆိုတော့ - ပျားရည်
တီးဝိုင်းနံမည်က - ပန့်ခ်
တိရစ္ဆာန်နံမည်က - ပူး
လမ်းနံမည်ကတော့ - ပန်းဆိုးတန်း (ခွိခွိ)
သီချင်းလေးထဲမှာ - ပြည့်စုံပါစေ (ဘိုဖြူ)
(၁၅-၁၀-၂၀၀၉၊ ၆း၀၀ pm)
at 2:45 AM Labels: တဂ်ပို့စ်
လူတွေက သူ့ကာရံနဲ့ သူ
လူတွေနဲ့ ကျနော်က တစ်ခြားစီ
ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ် စီးမျောနေရတဲ့
ကာရံမဲ့ သံစဉ်အို တစ်ပိုင်းတစ်စ
ကျနော်ကတင် ကာရံမဲ့တာ မဟုတ်
ဒါဟာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ရတဲ့ ကိစ္စ
မနက်ဖြန် သူမရဲ့အပြုံးကို မြင်ရဖို့ဆိုတာ
ဒါဟာ ကြိုတင် မှန်းဆဖို့ မလွယ်တဲ့ကိစ္စ
(၁၂-၁၀-၂၀၀၉၊ ၅း၄၆ pm)
at 3:44 AM Labels: ကဗျာ၊ အတွေးပုံရိပ်
အခု လျှပ်စီးတွေ ထစ်ချုန်းလက်နေတယ်
ရှုံးရင် မြေကြီးထဲ ဂျောင်းရမယ်
ပြည့်စုံ (၈-၁၀-၂၀၀၉၊ ၁၁း၄၈ pm)
at 9:51 AM Labels: ကဗျာ၊ စိတ်ထွက်ပေါက်
ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကျမရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဖော်ဝပ်မေးကနေတစ်ဆင့် ပို့ပေးလိုက်တာပါ…
ကျမ ကြည့်လိုက်မိတဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်တက်လာတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ရင်တစ်ခုလုံး နာနာကျင်ကျင် ခံစားမိသွားတယ်..
ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုပါ… သားအဖနှစ်ယောက် အိမ်ရှေ့က ခုံတန်းလျားလေးမှာ ထိုင်နေကြတယ်.. အဖေလုပ်သူက ဘေးမှာထိုင်နေပီး သားကတော့ သတင်းစာဖတ်နေခဲ့တယ်.. ရုတ်တရက် သူတို့ရဲ့ရှေ့က ပန်းခြုံလေးပေါ်ကို ငှက်ကလေးတစ်ကောင် လာနားတယ်..
အဘိုးကြီးရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေက သိချင်စိတ်နဲ့ ဝင်းပသွားခဲ့ပီး သားဖြစ်သူကို မေးလိုက်တယ်
‘It’sasparrow’
ငှက်ကလေးက နေရာရွှေ့သွားခဲ့တယ်. အဘိုးကြီးရဲ့ မျက်လုံးတွေက အဲ့ငှက်ကလေးရဲ့ အနောက်ကို ကပ်ပါသွားတယ်.. အဘိုးကြီးက ထပ်မေးလိုက်တယ်.
အဘိုးကြီးရဲ့ ထပ်ခါတလဲလဲ မေးခွန်းတွေမှာ သားဖြစ်သူက စိတ်တိုလာခဲ့တယ်.
‘အဖေ့ကို ကျနော် ပြောနေတယ် မဟုတ်လား.. အဲ့တာ စာကလေးပါလို့’
လေသံခပ်မာမာအောက်မှာ အဘိုးကြီးရဲ့ မျက်လုံးတွေက ပိုမှိန်ဖျော့လာခဲ့တယ်. ဒါပေမဲ့ သူထပ်မေးလိုက်တယ်…
‘အဲ့တာ စာကလေးပါလို့ အဖေ့ကို ကျနော် ဘယ်နှစ်ခါပြောရမလဲ… မသိဘူးလား..’
ပြင်းထန်စူးရှတဲ့ သားဖြစ်သူရဲ့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဒေါသစကားလုံးအောက်မှာ အဘိုးကြီးရဲ့ မျက်နှာအမူအရာဟာ ကျမ အသည်းနှလုံးကို ဖိကြိတ်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်..
အဘိုးကြီးက သူ့သားရဲ့ မျက်နှာကို အသေအချာကြည့်လိုက်ပီးမှ ရုတ်တရက် မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်.. သားဖြစ်သူကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အဘိုးကြီးရဲ့ မျက်လုံးတွေက နာကျင်နေတယ်လို့ ကျမတော့ ထင်တယ်.. သားက
အဘိုးကြီးက လက်ကလေးကို အသာ ရမ်းပြလိုက်ပီး အိမ်ထဲကို ဝင်သွားခဲ့တယ်… သူ ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ဟောင်းလေး တစ်အုပ်ပါလာခဲ့တယ်.. အဘိုးကြီးက သားဖြစ်သူရဲ့ လက်ကို ဆွဲပီး အဲ့ဒီစာအုပ်လေး
ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးထဲက အကြောင်းအရာတွေဟာ ဘာတွေများဖြစ်နေနိုင်မလဲ … သားဖြစ်သူရဲ့ စူးစမ်းတဲ့မျက်လုံးတွေနောက်ကို ကျမလဲ သိချင်စိတ်ပြင်းပြစွာနဲ့ လိုက်ကြည့်မိတယ်..
‘ဒီနေ့ဆိုရင် သားကလေး သုံးနှစ်ပြည့်ပီလေ.. သားကလေးနဲ့အတူ ပန်းခြံအလယ်က ထိုင်ခုံကလေးမှာ ထိုင်နေတုန်း ငါတို့ရဲ့ရှေ့ကို စာကလေးတစ်ကောင် ရောက်လာခဲ့တယ်…’
‘အဲ့တာ ဘာကောင်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို သားကလေးက ၂၁ ကြိမ်တောင် ငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်…’
‘သားကလေးကို အဲ့တာ စာကလေးပါလို့ ၂၁ ကြိမ်တိုင်တိုင် ထပ်ခါတလဲလဲ ငါ မညည်းမညူစတမ်း ပြန်ဖြေခဲ့တယ်.. တစ်ကြိမ်ပြန်ဖြေလိုက်တိုင်း ငါ့ရဲ့ ရိုးသားပီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ သားကလေးကို ပိုပိုချစ်မိတယ်..’
မျက်ရည်တွေက ကျမရဲ့ပါးပြင်ပေါ်ကို အလုအယက် ခုန်ဆင်းလာနေတယ်.. အဘိုးကြီးနဲ့ သူ့သားကို ကျမ မျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ ကြည့်နေမိတယ်.. အဘိုးကြီးရဲ့ မျက်လုံးတွေက ဂုဏ်ယူစိတ်နဲ့ ပြုံးနေခဲ့ပီး.. သားဖြစ်သူကတော့ ယူကျုံးမရတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ဝမ်းနည်းနေခဲ့တယ်.. ကျမကရော……. ??
ဒီလိုအပြုအမူမျိုးတွေ ဘယ်လောက်များ ကျမတို့ ပြုမူခဲ့ဖူးပါသလဲ.. ကျမ အထင်တော့ အကြိမ်ရေ တော်တော်များလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်..
ဒီအရွယ် ကြီးတောင့်ကြီးမားဖြစ်နေတဲ့ အချိန် မတိုင်ခင် အမေ့ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ လူသားလေးအဖြစ် စတင်မှီခိုကတည်းက အမေက ဒါ ငါ့ရဲ့ရင်သွေးလေးဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ဂရုတစိုက် ကြင်ကြင်နာနာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်.. အပူအစပ် မစားဘဲ အထိုင်အထ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ပီး ကိုးလတိုင်တိုင် သည်ဗိုက်ကြီးကို မရှက်မကြောက် လွယ်ပိုးထားပီး ကြင်နာယုယခဲ့တယ်.. မွေးဖို့ ပြင်နေတဲ့ အချိန်တုန်းကလဲ မီးနေသည်က သင်္ချိုင်းကို မျက်စောင်းသုံးခါထိုးတယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း အသက်နဲ့ရင်းပီး ကလေးလေးကို မွေးခဲ့ပြန်တယ်…
မွေးမွေးချင်းမှာလဲ အင်္ဂါစုံရဲ့လား နားအာရုံကောင်းရဲ့လား မျက်စိ အကြည်ဓာတ်ကောင်းရဲ့လား. ပူပန်ရသလို မှတ်ခြင်ယင် မကိုက်အောင်လဲ ဂရုစိုက်ရပြန်တယ်..
လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အခါကျတော့လဲ ခလုတ်တိုက်မှာစိုးလို့ ဒူးပြဲမှာစိုးလို့… စကားပြောတတ်လာ တော့လဲ မေ မေ ဖေ ဖေ ခေါ်တတ်အောင် သင်ပေးရသလို စကားပြောတတ်လာလို့ မေးခွန်းတွေ မနားတမ်း မေးရင်လဲ မညည်းမညူစတမ်း ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြေပေးတတ်ခဲ့တယ်..
မိဘတွေက သားသမီးတွေအပေါ်မှာ ဘယ်သောအခါမှ ရကောင်းစေ သဘောမထားခဲ့ဘဲ သားသမီးတွေကို ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်.. အမေ အဖေဟာ သားသမီး ဆယ်ယောက်ကို ကျွေးမွေးပြုစုနိုင်တယ်.. အမေ အဖေ တစ်ယောက်လောက်ကိုတောင် သားသမီး ဆယ်ယောက်က မပြုစု မကျွေးမွေးနိုင်တဲ့ အဖြစ်တွေ သိပ်ကိုများလာတဲ့အခါ.. ဒါတွေဟာ တရားရော တရားရဲ့လား… ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ကျမ တခါတလေ တွေးမိတယ်… ဒါပေမဲ့ ကျမလဲ လိမ်မာတဲ့ သားသမီးစာရင်းထဲမှာတော့ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး.. မလိမ္မာသလို ဆိုးလဲ မဆိုးတဲ့ အသင့်အတင့် သားသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမေ အဖေအပေါ် စိတ်ညစ်အောင် စိတ်ပူပန်အောင် အမြဲလုပ်ခဲ့ လုပ်နေတုန်းပါပဲ..
ဟိုးအရင် အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းကဆို အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရလာတဲ့အခါ ကျမရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းတွေဟာ ခြောက်သွေ့နာကျင်နေတတ်ခဲ့တယ်.. အဲ့ဒီအခါ ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ အိမ်ကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် တင်းကျပ်နေတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို မျိုသိပ်ထားရင်းနဲ့ကို ပေါက်ကွဲမိတတ်တယ်..
တချို့ အဖြစ်အပျက်တွေကို အမေက သိချင်စိတ်နဲ့ မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် တချို့အဖြစ်အပျက်တွေမှာ ကျမ လုပ်ဆောင်မှုတွေ မှားနေတယ်လို့ အမေက ထောက်ပြပြောဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမက လက်ခံလို့ မရတဲ့အခါ
‘ဒါကိုပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြန်မေးနေတယ် အမေရာ ဘယ်နှခါ ပြန်ပြောရမလဲ’
‘သည်းခံရမယ် ဒီလောက် သည်းခံရ တော်ရောပေါ့’
‘နားညည်းတယ် အမေရာ… ဒါတွေ ပြောမနေနဲ့တော့ အမေ လုပ်ချင်ရာသာ လုပ်လိုက်တော့’
အမေ့မျက်နှာက တစ်ချက်မပျက်ဘဲ နှုတ်ခမ်းတွေက ပြုံးနေရက်သားနဲ့ ကျမကို စကားဆက်မပြော တော့ဘူး.. ဘာရယ် မဟုတ် အမေ့ကို ပြန်ပြောမိတဲ့စကားလုံးတွေအတွက် ကျမလဲ နောင်တ ကောင်းကောင်း ရတတ်ပေမဲ့ အမေ့ကိုတော့ ဘယ်သောအခါမှ ပြန်မတောင်းပန်ခဲ့ဖူးဘူး.. စိတ်ထဲမှာ မကြည်လင်တော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ စကားမပြောတော့ဘဲ အိပ်ရာထဲ တန်းဝင်ပီး အိပ်ပစ်လိုက်တယ်. မနက်မိုးလင်းလို့ အလုပ်ကို သွားရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အမေက မှာနေကျစကားအတိုင်း
‘အပြန် မိုးမချုပ်စေနဲ့နော် သမီး.. ကားစီးတာ သတိနဲ့စီးနော်.. ဘုရားရှိခိုးသွားဦး’
ဒါတွေဟာ မရိုးနိုင်တဲ့ အမေ့ရဲ့မေတ္တာစကားတွေပဲ..
အိမ်ပေါက်ဝကနေ ပြုံးပီး ကျမကို မျက်စိတဆုံး လိုက်ကြည့်နေတတ်တဲ့ အမေ့နေရာကနေ ကျမ အခုအချိန်မှာ ပြန်စဉ်းစားလိုက်မိတယ်..
အဲ့ဒီလို ကျမတို့ရဲ့ စကားလုံးတွေ အပြုအမူတွေ ရိုင်းပျသွားခဲ့တဲ့ အကြိမ်တိုင်း အမေ့ရဲ့ စေတနာတွေ လျစ်လျူရှုခံရတဲ့အခါတိုင်း အမေ မွေးထုတ်ခဲ့လို့ လူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ သားသမီးတွေက အမေ့ရဲ့ နှလုံးသားတွေကို နာကျင်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့အကြိမ်တိုင်း အမေ ဘယ်လိုများ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်ခဲ့ပါသလဲ.. အမေ့ရဲ့ နှလုံးသားတွေကရော မနာကျင်ခဲ့ဘူးတဲ့လား…
ကျမကတော့ အခုအချိန်မှာ နာကျင်သွားတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ငိုနေမိတယ်..
မနေ့က သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ အိမ်မှာသာဆိုရင် အမေနဲ့ အဖေ့ကို လှုဖွယ်ပစ္စည်းတွေ ကန်တော့ပစ္စည်းတွေနဲ့ မောင်နှမတတွေ တစ်စည်းတစ်လုံးတည်း ထိုင်ရှိခိုးကြမယ်.. တစ်နှစ်ပတ်လုံး အမေမိဘကို ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံတွေနဲ့ ပြစ်မှားမိခဲ့သမျှ ခွင့်လွှတ်ကျေနပ်ပါလို့ ဝန်ချတောင်းပန်ကြမယ်.. အဲ့ဒီအခါတိုင်း အမေက ငိုပီး အဖေက အသံတုန်တုန်နဲ့ ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ ငါ့သား ငါ့သမီးတွေ ဘေးမသီ ရန်မခ……….. ….. ဆုတွေ တစ်လှေကြီးချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်.. အခုတော့……..
ကျမရဲ့ မိဘတွေဟာ ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ပိုအိုနေကြပီ.. အိမ်ကို ဖုန်းဆက်တိုင်း အဖေနဲ့ အမေရဲ့ အသံတွေက ပိုအိုစာသွားခဲ့ပီ.. ကျမတို့တွေ မိဘနှစ်ပါးကို လုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်ဖို့ အချိန် ဘယ်လောက်များများ ကျန်ပါဦးမလဲ.. အဲ့ဒီအတောအတွင်းမှာလဲ အမိအဖ နှစ်ပါးကို စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံအောင် ဘယ်လောက်များ လုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်မလဲ…
တခါတလေမှာရော အလိုမကျတဲ့စိတ်တွေနဲ့ တမင် မရည်ရွယ်ဘဲ အမေ အဖေရဲ့ နှလုံးသားတွေကို နာကျင်အောင် ပြုမူမိမလဲ……. အတွေးတွေထဲမှာတောင် ကျမ ဝမ်းနည်းရပါတယ်..
ကျမ အကြံပြုချင်တာကတော့ သိလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မသိလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အမေ မိဘတွေရဲ့ နှလုံးသားတွေ နာကျင်သွားအောင် စိတ်နဲ့ရော ကိုယ်အမူအရာနဲ့ရော စကားလုံးတွေနဲ့ပါ မစော်ကား မကျူးလွန်ကြဖို့ပါပဲ.... နောင်တဆိုတာ နောင်မှ ရတတ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံထားဖို့နဲ့ သည့်ပြင်ကိစ္စရပ်တွေတိုင်းမှာ နောင်တဟာ ပြင်လွယ် ပျောက်လွယ်ပေမဲ့ အမိ အဖကို စော်ကားမိတဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်ရပ်တွေ အပြူအမူတွေကတော့ နောင်တထက် ပိုကြီးမားတဲ့ အပြစ်ကို ရရှိစေမယ်ဆိုတာပါပဲ.. အမေ အဖေက ခွင့်လွှတ်လေလေ ကိုယ့်မှာ အပြစ်ပိုကြီးမားလေပါပဲ..
အခုအချိန်မှာ ကျမ လုပ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ အမေနဲ့ အဖေ့ကို ရည်မှန်းပီး လက်အုပ်ချီ ကန်တော့လိုက်တာပါပဲ..
‘ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံတွေနဲ့ ပြစ်မှားမိသမျှ သမီး အမိုက်အမဲကလေးကို ခွင့်လွှတ်ပါ အမေနဲ့ အဖေရယ်.. သံသရာအဆက်ဆက် အမိ အဖကို လုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်တဲ့ သမီးကောင်းရတနာ ဖြစ်ပါရစေ……’
ပြည့်စုံ (၄-၁၀-၂၀၀၉၊ ၄း၂၀ pm)
at 2:21 AM Labels: ဆုံးမစာ